Brezila: Topimaso An-tsarin’ny Campus Party Tao Brezila · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Mey 2017 5:34 GMT
Vakio amin'ny teny Português, srpski, македонски, Español, English
Nifarana ny Alahady teo ny Campus Party taona 2009 ( Fihaonan'ny Anjerimanontolo) tao Brezila São Paulo. Mihoatra ny 6.500 ny isan'ny olona nandray anjara tamin'ity andiany faharoa ity izay azo lazaina fa hetsika lehibe indrindra momba ny teknolojia sy ny kolontsaina nomerika ao Amerika Latina, mitondra adihevitra manodidina ny bilaogy, ny famoronana robots [raboto], ny sary sy lahatsary, ny lalao, ny fanovana endrika solosaina, ny rindrambaiko malalaka, ny fampidirana nomerika, ary ny tontolo iainana ihany koa. Ho hitanao ato amin'ity topimason'ny sarin'ny hetsika ity ny fifantenana ireo sary mahavariana tao anatin'ireo sary an'arivony nivoaka tao amin'ny Flickr teo ambanin'y fahazoan-dalana Creative Commons.
Sary avy amin'ny poperotico , miaraka amin'ny fanazavana manaraka toy izao:
Mpianatry ny Anjerimanontolo an'arivony nivory teto amin'ny kianjan'ny Campus Party 2009, izay natao tao Centro de Exposições Imigrantes.
Tonga ve ianao?
Ny Fanovana Endrika Solosaina, sary avy amin'ny _thebest_
“Indro ny UC!”, Sary avy amin'i Fabio Pazzini
Sary avy amin'i Luiza Medeiros , manana amin'ny lohateny hoe “Mila hira ny manam-pahaizan'ny solosaina ao amin'ny Campus Party”. Nitranga tamin'ny 24 Janoary ny fihetsiketsehana ary lasa fantatra tamin'ny anarana hoe “Dihin'ny Seza”, “Fampisehoan'ny Seza ” na “Fihetsiketsehan'ny Seza”. Indro ny lahatsary mampiseho ny hetsika. Manazava i Elzo Brito [pt]:
Tsy nisy hira hatramin'ny fiafarany satria nisy hopitaly eo akaiky eo hoy ny mpikarakara ny hetsika ka efa fanindroany izy ireo no nitaraina ary tonga ny mpiasan'ny Fitsarana niantso ny hamaranana ny hetsika tamin'ny fotoana fahatelo .
Sary avy amin'i Tatiana_Reis tao amin'ny faritra fampidirana nomerika.
Nisy ny fihetsiketsehana manohitra ny Volavolan-dalànan'ny Heloka Nomerika izay niteraka adihevitra ary mety ho lany ao amin'ny Kongresy amin'ity taona ity:
“Manohitra ny Volavolan-dalàna Azeredo “. Sary avy amin'i Tatiana_Reis .
Mivaky toy izao ny sora-baventy : “Arovy ny hoavin'ny Aterineto eto Brezila sy eto amin'izao tontolo izao”. Sary avy amin'i bntmzk. Nahazo ny laharana faharoa ny sarin'i Gabriel Chiarastelli mitovy amin'izany tao amin'ny Fifaninanana Sary Campus Party .
“Fanitarana ny Zava-misy Nampiana”, sary avy amin'i R. Seiji .
Mbola velona ny teknolojia tranainy. Sary avy amin'i HelenaN
“Moa ve manampy anao amin'ny famoronana ny hevitrao ireo bilaogera ?”. Sary avy amin'ny fore.
“Vonjeo ny mpandrafitra antserasera an’ izao tontolo izao, havaozy ny IE6. PS: Mampiasà Firefox “. Sary avy amin'ny vivoandando…
Fandresena ny zava-bitan'ny fanovana endrika solosaina tsara indrindra tao amin'ny firenena tao amin'ny Campus Party. Nahatratra ny hafainganam-pandeha 5.6 G. [pt] ny BR-OCTeam.
(Ny sasany amin'ireo tenimiantona mifandraika amin'izany tao amin'ny Flickr : cparty, cparty09, cpbrasil, campusparty, #cparty, campuspartybrasil, campuspartybrasil2009)